Cimraan Khan oo ka hor yimid soo jeedin ka timid Narendra Modi | Universal Somali TV
Cimraan Khan oo ka hor yimid soo jeedin ka timid Narendra Modi
Dowlada Pakistaan ayaa si kulul uga hadashay eedeynta kaga timid dhigeeda Hindiya oo la xiriirisay in ay wax ka ogeyd qorshaha qaraxii askarta hindiya ay ku hoobteen oo khamiistii hore ka dhacay dhulka Kashmir.
Ra,isul wasaaraha Pakistaan mr Cimraan Khan ayaa sheegay in dowladiisa ay sameyn doonto baaritaan dhaxal gal ah oo cadaalad ku dheehan hadii Delhi ay soo bandhigto cadeymaha muujinaya eeda ay u jeedisay dalkiisa.
Balse waxaa hadalkaan ka jawaab celiyay Narendra Modi oo ah Ra,isul wasaaraha Hindiya waxaana uu tilmaamay in cadeyn ahaan ay ugu filan tahay hogaamiyaha kooxda Jeysh Muxamed Mascuud Ashar oo ku sugan Pakistaan.
Si kastaba ha ahaatee weerarkii khamiistii ayaa waxaa ku dhintay 42 askari oo ka tirsanaa ciidanka Hindiyaa waanaa qasaarihii ugu balaarnaa oo mudo 30 sano ah soo gaara.
Kan-xigaMaxamed Bin Salmaan oo ka degay magaa...
Kan-horeDhaxal sugaha Sacuudiga oo lagu wado ...
46,614,559 unique visits